रक्सी खाएपछि किन अंग्रेजी बोल्छन् नेपालीहरु ? यस्तो रहेछ कारण - The First Nepali Digital Newspaper from Australia (Ausnepal news)
काठमाडौं – नेपाली समाजमा चाडपर्व होस् वा अन्य कुनै खुसी या दुःखको समय सकेसम्म रक्सी पिउने बहाना बनाइहाल्ने चलन हाबी हुँदै गएको छ । अझ सहरमा हुने प्रयः भोजहरु रक्सीले मात्तिएका हुन्छन्। अहिले त कुनै भोजमा निम्तो आउँदा पनि निम्तो पाउनेले ुआफ्नो सवारी साधन लिएर आउनु कि नलिईु भनेर सोध्ने गरेको पनि पाईन्छ । भोजमा रक्सी छ भने आफैँले सवारी साधन चलाएर गएको त फाइदा हुँदैन, मापसेमा परिन्छ। यसको अर्थ के निकाल्न सकिन्छ भने, जुनसुकै बहानामा किन नहोस् मानिसहरुको रक्सीप्रतिको आशक्ति बढ्दै गएको छ।
तर नेपाली समाजमा जब रक्सी भित्र छिर्छ, नेपालीहरुको अंग्रेजी बाहिर आउँने प्रचलनपनि रहेको छ । कतिपय अवस्थामा अलि(अलि अंग्रेजी बोल्न जानेको मान्छे नसामा धाराप्रवाह बोलेको सुनेका पनि छौं। हामी ठान्छौं, रक्सीको सुरमा अंग्रेजी बोल्ने वा बोल्न खोज्ने मान्छेले नाटक गरेका हुन्।
हालै एक वैज्ञानिक अनुसन्धानले हामीले लामो समयदेखि ‘मिथ’ बनाउँदै आएको रक्सी र अंग्रेजी भाषाबीचको यो सम्बन्ध पुष्टि गरेको छ। उक्त अनुसन्धानले भन्छ, ‘मान्छेले कुनै नयाँ भाषा सिकिरहेको छ भने सामान्य अवस्थामा भन्दा रक्सीको हल्का नसामा बढी धाराप्रवाह बोल्नसक्छ।’
रक्सी र भाषासँग जोडिएको यो वैज्ञानिक निष्कर्ष बेलायती तथा डच अनुसन्धानकर्ताहरूको हो। यसै साता ‘जर्नल अफ साइकोफर्माकोलोजी’ मा प्रकाशित शोधपत्रमा उनीहरूले रक्सी खाएको मान्छे कसरी र किन दोस्रो भाषा ९मातृभाषाबाहेक अन्य० बोल्न सक्षम हुन्छ भनी वैज्ञानिक जवाफ दिएका छन्।
रक्सी डिहाइड्रेसन गराउने कारण भएकाले रक्सी पिउनुभन्दा कम्तीमा एक घन्टाअघि र रक्सी पिएको एक घन्टापछि फलफूलको रस, प्रशस्त पानी पिउनु बेस हुन्छ । साँझ रक्सी पिएको छ भने पेट बिग्रने सम्भावना घटाउन भोलिपल्ट बिहान एउटा स्याउ, स्ट्रबेरी वा ‘बेरी’ प्रजातिका फलफूल खानु उत्तम हुन्छ । नुनमा लवण र पानीको मात्राले ‘इलेक्ट्रोलाइट’ तत्वको क्षतिलाई ठीक गर्छ ।
जुन तत्वले शारीरिक क्रियाशीलतामा मनोवैज्ञानिक सन्तुलन मिलाउँछ । साल्मोन जातको माछामा हुने ‘भिटामिन बी–६’ र ‘ओमेगा–३’ ले टाउको वा जिउ दुःख्ने समस्या हट्छ । ओमेगा–३ ले मनस्थिति (मुड) ठीक गर्न सहयोग पु(याउँछ । साल्मोन नपाए पनि हामीकहाँ ट्राउट माछा पाइन्छ । पुदिना वा काँचो अदुवा पिसेर तिल, टिमुर आदि पनि लगाएर बनाएको चटनीले वाकवाकी, डकार, पेट तथा वायुसम्बन्धी समस्या (ग्यास्ट्रिक डिस्ट्रेस) हटाउन रक्सीपछिको खानासँग लिनु राम्रो हुन्छ । रक्सी खाएपछि कम्तीमा २४ घन्टासम्म चिया, कफीजस्ता ‘क्याफिन’युक्त पेय नलिनु उत्तम हुन्छ ।
किन हुन्छ रक्सीको ह्याङओभर ?
रक्सी खाने मानिसहरू प्रायजसो ह्याङओभर (रक्सीको असर) को कुरा गर्छन् । राति खाएको रक्सीको ह्याङओभर बिहानसम्म गएको हुँदैंन । कतिपय अवस्थामा अलग–अलग प्रकारको रक्सी मिसाएर खाँदा मानिसले अझ बढी ह्याङओभर महसुस गर्छन् ।
शरीरमा पानीको कमी महसुस हुने, टाउको दुख्ने समस्या देखापर्छन् । यसविपरित बियर पिउनुअघि वाइन पिउँदा मानिस बिरामी हुन सक्छ, तर, बियर पछि वाइन लिने हो भने केही हुँदैंन भन्ने धारणा पनि मानिसमा रहेको पाइन्छ ।
निम्न यी कुरा अपनाएमा मदिराको ह्याङओभरबाट मुक्ति मिल्न सक्छ ।
-ह्याङओभर हटाउन सबैभन्दा पहिले शरीरमा पानीको मात्रा पूरा गर्नुपर्छ । बिहान उठ्नासाथ पर्याप्त पानी पिउनुपर्छ ।
-राति पानी पिउन ओछ्याननजिक पानी र गिलासको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
-फलफूलको रसमा भिटामिन सी उच्च मात्रामा पाइन्छ, मदिराको ह्याङओभर हटाउने राम्रो विकल्प फलफूलको रस पनि हो ।
-अदुवा हालेको चिया पिउन सकिन्छ ।
– बिहान ताजा हावामा केही समय हिँड्नुपर्छ ।
-पोटासियमले भरिपूर्ण खानेकुरा सेवन गरौं, आलु, हरिया सागसब्जी तथा च्याउमा पर्याप्त मात्रामा पोटासियम पाइन्छ ।
– कुरीलोलेपनि शरीरको अल्कोहल घटाउँछ । कुरीलोको अचार खाँदा राम्रो हुन्छ ।
मण्डनदेउपुर र पाँचखालमा काँग्रेसले जित्यो
जेठ २ ।काभ्रे, मण्डनदेउपुर नगरपालिका-२ को वडाध्यक्षमा नेपाली काँग्रेसका केशवप्रसाद तिमल्सिना विजयी हुनु […]
रुकुम, २४ पुस । लगातारको शीतलहर र चिसोसँगै जाडो बढेपछि जिल्लाका सबै सामुदायिक विद्यालय १५ दिनका लागि बन्द […]
तीन दिन बाढी आउन सक्ने सम्भावना न्युन
काठमाडाैं । अबको तीनदिन देशभर बाढीको सम्भावना नरहेको बाढी पूर्वानुमान शाखाले जनाएको छ । देशैभरीका ठूला […]
राष्ट्रियसभा निर्वाचन अन्तरगत प्रदेश १ को दुवै पदमा एमाले विजयी
विराटनगर । प्रदेश नं १ मा अाज दुई सदस्यका लागि भएको राष्ट्रियसभाकाे चुनावमा दुवै पदमा एमाले उम्मेदवार […]
फिफाको नयाँ वरीयतामा नेपाल चार स्थान खस्कियो
काठमाडौं । विश्व फुटबल महासंघ फिफाको नयाँ वरीयतामा नेपाल चार स्थान तल झरेको छ । फिफाले सार्वजनिक गरेको नयाँ […]
‘बरु एक देश एक देश एक प्रदेश बनाऔँ’
काठमाडौँ, २२ साउन बिहीबार दिनभरी दलहरूबीच छलफल चल्दापनि संविधानका अन्तरवस्तुका विषयमा ठोस सहमति जुटेन । […]